उपचार वापत एनआईसी बैंकले १५ लाख रूपैया दिए पछी दंग विर्तामोडका महेश - Purbeli News
उपचार वापत एनआईसी बैंकले १५ लाख रूपैया दिए पछी दंग विर्तामोडका महेश
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०४, २०७६ समय: २०:५२:३७
झापा / एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड विर्तामोडले गम्भीर रोगको उपचार वापत खातावालालाई १५ लाख भुक्तानी गरेकाे छ । विर्तामोड निवसी महेश अग्रवाललाई बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कुमार राठीले औषधी उपचार बीमा बापत रूपैया १५ लाख भुक्तानी गरेका हुन् । अग्रवालले एनआईसी एशिया बैंकको चन्द्रगढी शाखामा सुपर चमत्कारिक ‘डायमण्ड’ श्रेणीको खाता खोली बीमाको रमम दावी गरेका थिए ।
बैंकले उपलब्ध गराएको बीमासहितको बचत खाता सुविधा अन्तर्गत खातावालाले ओपन हर्ट सर्जरी गराए वापत उक्त रकम बराबरको बीमा लाभ लिएका हुन्। उनले गम्भीर रोगको उपचार बीमा अन्तर्गत उक्त सुविधा हासिल गरेका बताएका छन् । बैंकका अनुसार बीमा सहितको निक्षेप योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म देशभरका १ सय २७ भन्दा बढी ग्राहक महानुभावहरूले बीमा वापतको ८७ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेका छन्छ।
बैंकले तीन किसिमका बीमा सुविधाहरू समेटिएको न्यू सुपर चमत्कारिक बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको जसमा २१ लाख रूपैयाँ बराबरको बीमा लाभको फाइदा ग्राहक महानुभावहरूले लिन सक्ने बैंकले जनाएकाे छ । उक्त खाता खोल्नुभएका ग्राहक महानुभावहरूले २१ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा अन्तर्गत खातावालाको दुर्घटनाबाट मृत्यु वा पूर्ण रुपमा अशक्त भएमा रू. १० लाखसम्म, १८ घातक रोगहरूको लागि रू. १० लाखसम्म तथा रू. १ लाखसम्मको औषधी उपचार बीमा सुविधा बैंकले उपलब्ध गराउदै आएको जनाएकाे छ । औषधी उपचार बीमा अन्तर्गत ८० हजार रूपैयाँ अस्पताल भर्ना र २० हजार रूपैयाँ ओपिडी सेवाका लागि लागू हुने एनआईसी एशिया बैंकले जनाएकाे छ ।
देशभर ३१९ शाखा कार्यालयहरू, ४५० एटिएम, १०६ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ५२ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत्बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो शाखा सञ्जाल गर्ने बैंक हाे । करिब २१ लाख ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरु अत्यन्त उत्साहप्रद रहेकाे जनाइएकाे छ । उत्तरदायी बंैकिङ्गको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ भने वित्तीय समावेशिकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
चैते धानको अनुसन्धान शुरु